Google Home, Vaovao
Dingana vitsivitsy hanohanana ireo mpandraharaha eto an-toerana - midira amin'ny fanamby #LocalLove
Google, Google Maps, Sarintany google
Loharano sy sary: ​​Famoahana an-gazety
Hahazo vaovao be ny fandoavam-bola Google Pay
Google, google pay, fandoavam-bola
Ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Google Pay dia ho malaza kokoa atsy ho atsy. Ny orinasa avy amin'ny Mountain View dia nanapa-kevitra ny hamorona endri-javatra mahaliana iray hafa. Jereo izay hiova. Google Pay dia mitohy ...
Mpanampy Google miaraka amin'ny fanatsarana bebe kokoa
Mpanampy Google, Google
Ny Google Assistant dia miha mahasoa kokoa, indrindra raha ny amin'ny fifehezana ireo fitaovana an-trano an-trano. Ny fanavaozana farany indrindra dia ny hahatonga azy ireo handika ireo hafatra navoaka kokoa. Ny mpanampy ny feon'i Google dia tsy lavorary, na izany aza ...
Google Home, hevitra, Smart Auto
Roav Anker Bolt Set - Ahoana ny fomba hamadihana ny fiaranao ho "Kitta" avy amin'ny "Knight Raider"
mpanampy, Mpanampy Google, Google, roav bolt, auto auto
Iza aminareo no mahatadidy ny andiany "Knight Raider" miaraka amin'i David Hasselhof? Maika ny hanazava ireo mpamaky tanora kokoa aho. "Knight Raider" dia famokarana nanomboka ny taona 1982–1986 momba ilay mpilalao malaza Michael sy ny fiarany miaraka amina mahaliana ...
Fanavaozana ny Google Meet: fivoriana manintona, miampy ary mamokatra bebe kokoa
24 Aprily 2021
Tamin'ny taon-dasa, ny fivoriana virtoaly dia singa iray lehibe amin'ny fanovana ny asa manerantany. Talohan'ny areti-mandringana dia nitazona andraikitra lehibe fotsiny izy ireo tamin'ny ekipa niparitaka, androany dia ahafahan'izy ireo miasa ihany koa ho an'ireo ekipa sy fikambanana izay ara-batana teo aloha ...
Apple dia nivarotra mpandahateny betsaka kokoa noho ny Google tamin'ny Q1 2021
paoma, Google, mahay miteny
Ny orinasa mpandalina Omdia dia nanao fikarohana izay nahita fa Apple dia nivarotra mpandaha-teny marani-tsaina kokoa noho ny Google tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021. Hita anefa fa mety haharitra vetivety io tombony io. Mampiseho ny statistika fa amin'ny telo volana voalohany amin'ny ...
Toa manasa ny Google Pixel Watch. Fantatray ny daty famotsorana
Google, fiambenana pixel google, fizarana voalohany
Google dia efa nanomana ny famantaranandrony voalohany izay havoaka amin'ny herinandro ho avy. Nisy fivoahana iray efa niseho tao amin'ny fantsona Front Page Tech ao amin'ny YouTube, izay manambara ny fisehoan'ny Google Pixel Watch sy ...
Fampiharana Google miaraka amin'ny marika manokana
Google, ny fiainana manokana
Google dia namoaka marika momba ny tsiambaratelo ho an'ireo fampiharana malaza indrindra ao amin'ny App Store. Jereo izay niova sy izay tokony tadidio aloha. Fanemorana kely ny ampahan'ny Google Ny rindranasa sasany toy ny Photos, ...
Ity ve ny ringtone marani-tsaina vaovao avy amin'i Google?
Google, google home, lakolosy marani-tsaina, bela sarimihetsika sarimihetsika sarimihetsika
Ny rindranasa Google Home amin'ny andiany 2.35 ho an'ny Android sy ny iOS dia misy fanatsarana maro sy fanamboarana lehibe kokoa na latsaka kokoa. Ireo mpandinika tsara dia nahita tamin'ny famolavolana ny fanontana rindrambaiko ny sarin'ny fitaovana mety ho lakolosy manan-tsaina ...
Google dia manandrana ny Memory, endrika vaovao ananan'ny mpanampy azy
Araka ny tatitra farany, Google dia mizaha toetra Google Assistant vaovao antsoina hoe Memory. Izy io dia karazana mpikarakara manan-tsaina izay manangona asa amin'ny toerana iray hotanterahina, naoty ary fanangonana votoaty mahaliana ho an'ny mpampiasa. Ho fahatsiarovana no ...
Fanalahidy nomerika Android. Google dia manolotra vahaolana vaovao
Vao tsy ela akory izay i Google dia nanolotra vahaolana vaovao antsoina hoe Android Ready SE Alliance, dia ny fanovana ny smartphone ny lakilen'ny fiara sy ny trano ary koa antontan-taratasy hafa, toy ny fahazoan-dàlana mitondra fiara na ...
Tsy mandeha ny rindranasa Android, ao anatin'izany ny Gmail - manana fanamboarana vonjimaika izahay
Nahazo fampahalalana izahay fa mihabe ny isan'ny fampiharana Android manana olana amin'ny fandidiana. Tsy mandeha ny Gmail, fa fampiharana hafa am-polony koa. Na izany aza, misy ny vahaolana vonjimaika! Ny olana voalohany dia natomboka tamin'ny fitaovana Samsung, fa ny olana dia mipoitra ...
Google Home, hevitra
Ny fiverenan'ny Hybrid Yeedi 2 - haharesy ny lafiny maizin'ny hery ve izany?
Google, MOP, vacuum madio, manan-tsaina
Ary farany dia - Yeedi 2 Hybrid! Ity no fihaonako faharoa amin'ny mpamokatra (azonao jerena eto ny voalohany). Ny andiany faharoa an'ny mpanadio banga ao amin'ity orinasa ity dia misy zavatra betsaka hatolotra. Manana fakantsary izay ...